20 Kununura minamato yeVafundisi | MINYENGETERO MARI
musha Pfungwa dzemunamato 20 Kununura minamato yeVafundisi
20 Kununura minamato yeVafundisi
2 VaTesaronika 3: 1-5:
1 Pakupedzisira, hama, mutinyengeterere, kuti shoko raIshe rive nemahara, uye rikudzwe, sezvazvakaita kwamuri. 2 uye kuti tinunurwe kubva kune varume vasingafungi uye vakaipa: nekuti vanhu vese havana kutenda . 3 Asi Ishe akatendeka, uyo unokusimbisai, nekukuchengetedzai zvakaipa. 4 Uye tine chivimbo muna She chekubata pamuri, kuti munoita uye nekuita izvo zvinhu zvatinokurairai. 5 Uye Ishe ngaatungamirire moyo yenyu murudo rwaMwari, nemumoyo murefu waKristu.
Iko kudaidzwa kwemufundisi kudaidza kwakakwirira, uye zvinotora nyasha dzaMwari kuzadzikisa kudaidzwa kwako semufundisi. Mufundisi wega wega ane basa kubva kuna Mwari rekuchengeta makwai (vanhu vaMwari) achiafudza neshoko nekuvanamatira nguva dzose. Asi nei isu tese tichiziva nenyaya yekuti vafundisi vanonamatira nguva dzose kumakwai aMwari ari pasi pekutarisirwa, isu tinotadza kuona kuti vafundisi vanodawo minamato. Sezvineiwo, vafundisi vanoda minamato kupfuura nhengo. Izvi imhaka yekuti, kana mufudzi akarwiswa, hwai inotiza, Zekariya 13: 7. Nhasi ndanyora minamato makumi matatu yekununurwa yevafundisi, mufundisi wese anoda kuve nenhengo dzinogara dzichimira munzvimbo uye nekutambudzika muminamato yevafundisi. kununurwa of vafundisi.
Asi nei tichifanira kunyengeterera vafundisi vedu?
Chekutanga tinofanirwa kunzwisisa kuti madhimoni manhamba ekutanga chinangwa ndechekuti vafundisi vakwire muchivi, iye anoziva kuti kana achigona kuwana musoro, muviri unozotevera, nekuti uropi hunodzora muviri huri mumusoro. Naizvozvo pakunamata iyi minamato yekununura vafundisi, tinofanirwa kunamatira kuti vafudzi vedu vasawira mumiyedzo yekukanganisa kana zvivi. Tinofanira kunamatira kuti Mwari varambe vachivasimudzira naVake nyasha.
Kechipiri tinofanira kunamatira nguva dzese kubuda kwekuratidzwa kubudikidza nevafundisi vedu. Mwari ngavarambe vachivabatsira neruzivo rutsva rweshoko Rake kuti varambe vachikurudzira vatsvene uye kuvavakira ivo mukukwana kwaKristu.
Yetatu tinamate tinamate nekushinga uye kutaura kuti titaure izwi raMwari tisingatyi mukati mekupokana, tendera kuti shoko raMwari kubudikidza navo riitike zvakasununguka uye ngatisapindirwa nemasimba erima.
Chechina isu tinamate kuti Mwari vakudze uye vasimbise ipapo mazwi nezviratidzo nezvishamiso, kuponeswa kukuru kwemweya uye kupora kwakasiyana uye kununurwa. Izvi zvinozotungamira mukutangwa kwevazhinji pakutenda.
Chekupedzisira asi chisiri chidiki, tinofanira kuramba tichinamatira ikoko mhuri, vakadzi vavo nevana, inyasha dzaMwari dzinovachengeta, kuti Mwari vazvipe munzvimbo dzese uye isu tinofanirawo kuedza kuvakomborera nekunyama kunyangwe isu chatinonyengeterera. ivo
Kana isu tikanamatira vafundisi vedu saizvozvi, tinoona kuti ruoko rwaMwari pahupenyu hwavo rucharamba ruchikura. Ini ndinotenda kuti pamunenge muchiita minamato iyi yeva! Ndinoona Mwari vachiita zvinhu zvikuru kubudikidza neshumiro shanu kusvika! D idzi mumazuva ano ekupedzisira muzita raJesu.
1. Baba ndinokutendai neruoko rwenyu rune simba mukushanda muhupenyu hwevafundisi vedu muzita raJesu
2. Sezvo vazhinji vakadaidzwa asi vashoma vakasarudzwa, tendaIshe nekusarudza mufundisi wedu muzita raJesu
3. Baba, podzai vafundisi vedu kuti varambe vachiunza mweya kutendevuka pamberi paIshe.
4. Baba, ndinotaura kuti vafundisi vedu havazove museve wakashata mumaoko aMuiti wangu, muzita raJesu.
5. Chero simba rekutanga, richirwisa mufundisi wedu uye kudana kwake, ngariparadzwe, muzita raJesu.
6. Joko rega rega, kushanda kupesana nekukura kwemweya kwevafundisi vedu, kutyora, muzita raJesu.
7. Nesimba raMwari, muvengi haazoite vafundisi vedu muenzaniso wakashata, muzita raJesu.
8. Chero hupombwe hunhu, hwakagadzirirwa kutambisa kudanwa kwevafundisi vedu vanofanirwa, kufa, muzita raJesu.
9. Simba kupedzisa zvakanaka, huya pamusoro pevafundisi vedu, muzita raJesu.
10. Nzvimbo yega yega yekununurwa isina kukwana muhupenyu hwevafundisi vedu, gashira kununurwa kwakazara nemoto, muzita raJesu.
11. Yese catalact yemweya, ibve kure nechiono chevafundisi vedu, muzita raJesu.
12. Wese mweya wekurara, muhupenyu hwevafundisi vedu ngauparadzwe izvozvi !!! Muzita raJesu.
13. Baba, ndinofukidza vafundisi vedu vese uye nevashandiri neropa raJesu.
14. Museve wese unopokana nehushumiri, unopfurwa wakananga vafundisi vedu ,, backfire, muzita raJesu.
15. Moto weMweya Mutsvene, paradza mabasa ese erima muhupenyu hwevafundisi vedu muzita raJesu.
16. Mikova yese, yakavhurwa kumuvengi wekudaidzwa kwevafundisi vedu, ngavharwe, muzita raJesu.
17. Baba vangu uye Mwari wangu, regai mvura yehupenyu ienderere munzvimbo yese yakafa yehupenyu hwemweya yevafundisi vedu muzita raJesu.
18. Chose chombo, chakagadzirirwa kupesana nevafundisi vedu, ngavaparadzwe, muzita raJesu.
19. Chero ipi hwaro hwenyoka uye chinyavada, chakarongedzwa muhupenyu nehushumiri hwevafundisi vedu chinofanira kuparadzwa muzita raJesu.
20. O Mwari wenyasha dzese, gamuchidza vafundisi vedu nenyasha nyowani pabasa guru iri muzita raJesu.
Ndatenda nekupindura minamato yedu muzita raJesu.
Previous nyayaPfungwa dzeMunamato Zvekugovera kweMweya
inotevera30 Chikumbiro chemunamato Pakutyora joka
Amosun Samuel Olusegun Ndira 17, 2020 At 2:13 am
Zvakanaka changamire changamire
Kuverenga Bhaibheri Kwezuva Nezuva Nhasi 3th November 2018.
Kunamata Points Yemoto weRumutsiriro Kwehupenyu hweChikristu
20 Minamato yeminyuko yekuputsa kutuka kwakaoma